Ndị njem nleta n'ike: Childrenmụaka nọ na Brunei Darussalam, Cambodia, Indonesia, Lao PDR, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thailand na Vietnam
Home » Akụkọ ndị ọbịa nke mba ụwa » Ozi banyere njem na Thailand » Ndị njem nleta n'ike: Childrenmụaka nọ na Brunei Darussalam, Cambodia, Indonesia, Lao PDR, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thailand na Vietnam
Ndị njem nleta na-edina ụmụaka na Brunei Darussalam, Cambodia, Indonesia, Lao PDR, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thailand na Vietnam; ọ bụ eziokwu dị mwute banyere njem na njem njem ụwa. Gbachi nkịtị abụghị nhọrọ.
Oge ochie agabigala na iwu na-adịghị ike nke ndị mmanye iwu na-abawanye n'ihe egwu nke ịrigbu ụmụaka n'ike n'ike n'Ebe Ndịda Ọwụwa Anyanwụ Esia, ka akụkọ ọhụrụ na-ekwu.
Ihe ọdịnala dị iche iche nke imetọ ụmụaka, dị ka ịlụ di na nwunye na ịzụ ahịa ụmụ mmadụ ka na-abụ ihe esemokwu, ka NGO ECPAT International kwuruMmegbu ụmụaka na ndịda ọwụwa anyanwụ Asia, ”Nke na-enyocha ihe ịtụnanya na mba 11 dị n’ógbè ahụ. Agbanyeghị, akụkọ ahụ na-ekwu na nke a ka njọ n'afọ ndị na-adịbeghị anya site na nghọta dị ala banyere okwu a, yana mmụba ndị njem mpaghara na ịba ụba nke ịntanetị.
“Ọganihu ngwa ngwa nke njem nleta na-eme ka mmetọ ụmụaka n’ógbè ahụ na-akawanye njọ,” ka nnyocha ahụ na-ekwu. "Ihe ka njọ ọnọdụ a bụ mmepe dị egwu na ntanetị na teknụzụ nkwukọrịta, nke mụbara na ohere dị iche iche iji rigbuo ụmụaka, ma ọ bụ iji nweta uru site na mmegbu ụmụaka."
ECPAT na-ekwu na ihe kpatara nsogbu ndị a bụ akụrụngwa iwu na-esighi ike n'ọtụtụ mba ndịda Ebe Ọwụwa Anyanwụ Eshia, nke na-enye ndị dara iwu ohere ịta ha ahụhụ. Ma ọ bụghị naanị ndị ala ọzọ ka ụta dịịrị, ndị mere mpụ taa sitere na mpaghara ahụ. “Ọ bụ ezie na ndị njem si mba ndị dị n’Ebe Ọdịda Anyanwụ arewa ka bụ nnukwu nsogbu, ọ bụ echiche na-ezighị ezi a na-ahụkarị na ọ bụ ha mejupụtara ọnụ ọgụgụ ka ukwuu nke ndị dara iwu a na-edina ụmụaka,” ka Rangsima Deesawade, bụ́ Onye Nchịkọta Mpaghara ECPAT nke Ebe Ndịda Ọwụwa Anyanwụ Eshia na-ekwu. “Ọtụtụ mmejọ ndịda na Ndịda Ọwụwa Anyanwụ Eshia na-eme ndị si mba dị iche iche na mpaghara ma ọ bụ n'akụkụ ndị ọzọ nke Eshia.”
Dabere na ọmụmụ ọhụrụ ahụ, ebe njem njem ọdịnala dịka Thailand na Philippines na-aga n'ihu na-eyi ụmụaka egwu, n'ihi njem njem na ebe obibi dị ala, mba ndị ọzọ dịka Cambodia, Indonesia, Myanmar na Vietnam Nam aghọwo ebe a ma ama maka ụmụaka ndị omempụ na-enwe mmekọahụ.
Akụkọ ahụ na-egosikwa oke ihe egwu na-arịwanye elu site na ịgbasawanye ịntanetị, nke ọ na-ekwu na-ebibi ụmụaka ma na-etinye ha n'ihe ize ndụ ka ukwuu nke mmegbu na nrigbu. Ọ na-ekwu na mmepụta nke ihe ụmụaka n'ụzọ mmekọahụ na Philippines na-eweta ugbu a ihe ruru US $ 1 ijeri nke ego ha na-enweta kwa afọ; a chọpụtala mba ụfọdụ dị na mpaghara ahụ dị ka ndị nwere isi onyonyo nke mmekọahụ na ụmụaka; na Lao PDR, ụfọdụ ụlọ ahịa CD na-ere ihe ụmụaka n'ụzọ mmekọahụ n'ihu ọha.
Deesawade kwuru, sị: “Egwu ụmụaka a na-enwe n’ onlinentanet na-eyi ụmụaka iyi egwu mmekọahụ. “Ebe ọ bụ na Ndịda Ọwụwa Anyanwụ Eshia na-ejikọkwu ọnụ, ọ na-enwe njikọ chiri anya na nsogbu ụwa a.”
Eziokwu ndị ọzọ / ndu ndị akụkọ ahụ gosipụtara:
A ka nwere nnukwu ọdịiche na nghọta nke imetọ ụmụaka na mpaghara. Achọrọ ọtụtụ nyocha ọzọ;
Kpụrụ nke mmejọ dị iche n'etiti ndị njem si mba dị iche iche. Dịka ọmụmaatụ, ụmụ nwoke Asia nwere ike ịmegbu ụmụ agbọghọ, gụnyere ụmụ agbọghọ na-amaghị nwoke, ebe ndị omempụ ndị ọdịda anyanwụ nwere ike ịbịakwute ụmụ nwoke Eshia iji nweta mmekọahụ.
Ndị na-emebi iwu ụmụaka na-achọwanye ụmụaka site na afọ ofufo ma ọ bụ ọrụ ọkachamara, dịka site na ịchọta ọrụ ma ọ bụ ohere afọ ofufo na ụlọ akwụkwọ, ụmụ mgbei, na ndị NGO;
Na Cebu City dị na Philippines, otu n'ime mpaghara kachasị daa ogbenye na mba ahụ, pasent 25 nke ndị na-edina nwoke na nwanyị n'okporo ámá bụ ụmụaka na-emegbu ụmụaka;
N'ime nnyocha nke ụmụ nwoke na-arụ ọrụ n'okporo ámá na Sihanoukville, Cambodia, pasent 26 nke ndị zaghachiri gosiri na ha esorola ndị okenye nwee mmekọahụ n'ihi ego, nri ma ọ bụ uru na uru ndị ọzọ;
Alụmdi na nwunye nwa oge na-abawanye na Indonesia. Ebe a na-amanye ụmụ nwanyị Indoneshia ịlụ, ndị a na-akpọ 'alụm di na nwunye', na-enye ụmụ nwoke ala ọzọ ohere, ọkachasị si Middle East, iji rata ụmụaka n'ụzọ mmekọahụ. Trazụ ahịa ụmụaka na-arị elu iji nweta ihe a na-achọ; na
A na-akpọrọ ụmụ agbọghọ na ụmụ nwoke ndị nwoke gbara afọ iri na abụọ gbagoro agbago Thailand ka ha nwee mmekọ nwoke na nwanyị. Ekwenyere na ụfọdụ ndị nne na nna rere ụmụ ha ozugbo na ụlọ ọrụ mmekọrịta nwoke na nwanyị, ebe n'ọnọdụ ndị ọzọ, a na-akpọrọ ụmụaka ka ha rụọ ọrụ na ngalaba ọrụ ugbo, dị ka ndị ọrụ ụlọ ma ọ bụ maka ụlọ ọrụ ndị ọzọ mana a na-atụba ha na ụlọ ọrụ mmekọahụ nke Thailand.
Mmegbu ụmụaka na ndịda ọwụwa anyanwụ Asia bụ ntụleghachi akwụkwọ nke akwụkwọ sitere na mba iri na abụọ Ndịda Ọwụwa Anyanwụ Eshia (Brunei Darussalam, Cambodia, Indonesia, Lao PDR, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thailand na Vietnam Nam). Ọ na-egosipụta ọtụtụ ihe gbasara mmepe na nrigbu mmekọahụ na-eme na mpaghara ahụ dum.
Maka akụkọ zuru ezu: http://www.ecpat.org/wp-content/uploads/2018/02/Regional-Overview_Southeast-Asia.pdf
ECPAT International bụ netwọkụ zuru ụwa ọnụ nke nzukọ ndị raara nye ịkwụsị mmegbu ụmụaka. Site na ndị otu 103 na mba 93, ECPAT lekwasịrị anya n'ịzụ ahịa ụmụaka maka ebumnuche mmekọahụ; nrigbu nke ụmụaka site n'ịgba akwụna na ikiri ihe ndị na-akpali agụụ mmekọahụ; ịkpafu ụmụaka n'ịntanetị; na nrigbu mmekọahụ nke ụmụaka na mpaghara njem na njem nleta. ECPAT International Secretariat dị na Bangkok Thailand.
Air Astana na-ebupụta ọrụ Astana-London kwa ụbọchị
Agbọ elu na-adịgide adịgide: ebumnuche ndị njem ụgbọ elu 1 ijeri nke IATA setịpụrụ